Fankasitrahana : Shyn sy Stéphanie no voafidin’ny RDJ Mozika ho mpanakanton’ny taona 2017 -
AccueilVaovao SamihafaFankasitrahana : Shyn sy Stéphanie no voafidin’ny RDJ Mozika ho mpanakanton’ny taona 2017
Fankasitrahana : Shyn sy Stéphanie no voafidin’ny RDJ Mozika ho mpanakanton’ny taona 2017
05/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Ambohipihaonan’ny mpanakanto eo amin’ny sehatry ny hira ny teny amin’ny CCI Ivato ny sabotsy lasa teo. Lanonana nentin’ny onjampeon’ny tanora (Rdj) nankasitraka ireo mpanakanto malagasy. Taorian’ny fifidianana samihafa nataon’ny mpihaino io onjam-peo io, Shyn sy Stéphanie no voafidin’ny « RDJ Mozika » ho mpanakanton’ny taona 2017. Vokatra izay tsy nahagaga loatra, indrindra ho an’i Shyn izay nibata amboara telo nandritra io hetsika io. Ankoatra ny maha mpanakanton’ny taona 2017 azy, dia izy ihany koa no voafidy teo amin’ny sokajin’ny « Mozika r’n’b » tamin’ny alalan’ilay hira « Overdose », sy tamin’ny « Mozika Afro dance » tamin’ilay hira « Resim-pitia ». Taonan’ny fibatana amboara araka izany ny taona 2017 ho an’ity mpanakanto avy any Toamasina ity, satria dia izy ihany koa no nahazo ny lokan’ireo mpanakanto afrikana vao misandratra mendrika taty Afrika, na ny «Révélation du continent africain » tao anatin’ilay lalao « All Africa Music Awards 2017 » (AFRIMA 2017). Tetsy ankilan’izay, dia anisan’ireo mpanakanto nisongadina teo amin’ireo andriambavilanitra kosa i Stéphanie raha nitaha tamin’ireo voafantina hifaninana taminy tamin’io hetsika io.
Tamin’ny ankapobeny, dia amboara 29 no natolotry ny RDJ ho an’ny mpanakanto malagasy teo amin’ny sehatry ny hira, ka ankoatra ireo tao anatin’ny fifaninanana dia nolorana ny amboaram-boninahitra i Bodo, ary amboaran’ny mpanakanto zandriny indrindra kosa i Christian K. Toa izany koa ny amboaran’ireo nanao fitafy nanaitra indrindra izay lasan’i Shayron teo amin’ny lehilahy, ary Joyce Mena Makoa kosa teo amin’ny vehivavy.
Ankoatra ny fanolorana amboara, dia fampisehoana ihany koa ny RDJ Mozika nandraisan’ireo mpanakanto malagasy anjara. Ny hetsika niarahana tamin’i Honorat, Gothlieb ary Barhone dia nitondra ny talentany tamin’ny seho an-tsehatra notronin’ireo mpitendry kalaza ry Stéphanie, Elidiot, Bodo, Gothlieb izay nitondra tsiaro an’i Johnny Halliday…
Nitondra ny teny fankasitrahana ny mpanohana sy ny mpanakanto ary ny mpihaino sy mpijery ny Tale Jeneralin’ny RDJ Tahiana Rasolojaona.
Ireo amboara hafa.
Spectacle de l’année : Samoela, Mozika Electro-Dago-Mozika : Rak Roots, Mozika soft féminin : Niu Razah, Mozika mafana masculin : Elidiot, Mozika fiderana : Antsa an’i Kristy, Mozika milamina : Tence mena feat. Robbie, Mozika rock : Mage 4, Mozika mafana féminin : Black Nadia, Comme back de l’année : 18,3, Mozika Cover : THT – G ASTA, Mozika buzz : DJ Smex & Samoan, Artiste masculin le plus diffusé : Welvie Waves, Artiste féminin le plus diffusé : Andriann, DJ beatmaker : Cyemci, Mozika duo : Ariane & Paris, Mozika rap : Jento & Laz, Révélation masculine : Lion Hill, Mozika soft masculin : Misié Sayda , Variété mihetsika : Arione Joy , Révélation féminine : Chantal, Mozika variété : Dady Love.
Mitohy ihany ny fihetsiketsehana ataon’ireo andian’olona manoloana ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana na HCC, etsy Ambohidahy. Nanomboka tany amin’ny 9 ora sy sasany maraina tany, omaly, dia nifampitaona teny amin’ny manodidina tsy lavitra ny ...Tohiny